PRAIMINSITRA NTSAY CHRISTIAN : “Ao anaty vanim-potoana fanarenana ny firenena isika izao”
Tsy diso anjara tamin’ny fankalazana ny andron’ny manamboninahitra 2020 ny teo anivon’ny Primatiora. 13 janvier 2020
Nanome voninahitra ny lanonana nentina nankalazana izany, omaly, ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian. Araka ny fomba fanao mandritra ny fankalazana moa dia ireo manamboninahitra zandriny no nitarika ny fibaikoana. Fotoana iray koa anefa io nifanakalozana ary nanamafisana ny firaisan-kina, ka ankaotra ny hetsika nokarakaraina dia nisy ny fanolorana gisa ho an’ireo zoky, dia ny Praiminisitra sy ireo lehiben’ny manamboninahitra tao an-toerana, ho mariky ny fanajàna sy fankasitrahana azy ireo.
Nanambara ny Praiminisitra nandritra ny lahateny nataony fa ao anatin’ny vanim-potoana fanarenana ny firenena isika izao, ka ankoatra ny laharam-pahamehana izay tsy maintsy hotontosaina mba hanatrarana ny fampandrosoana ny firenena dia hojerena ny hanatsarana hatrany ny fampitaovan’ny manamboninahitra eo anivon’ny « Bataillon de sécurité de la Primature (BSP) », izay sampana iray miandraikitra ny fiarovana.
Tsy nanadino ireo manam-boninahitra rehetra mikely aina amin’ny fitandroana ny filaminana manerana ny Nosy koa ny Praiminsitra. Niarahaba sy nirary soa ho azy ireo izy hahatontosa antsakany sy andavany ny asa sahaniny.